Celebrities တွေလို သွယ်သွယ်လျလျလေးဖြစ်ဖို့ Diet ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? – MyStyle Myanmar
Celebrities တွေလို သွယ်သွယ်လျလျလေးဖြစ်ဖို့ Diet ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
နာမည်ကျော်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သာမန်လူတွေထက် ထူးခြားနေတတ်ပါတယ်။ အသားအရေလှကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ပြေပြစ် ကြပါတယ်။ သင်ကော နာမည်ကျော်တွေလို ခန္ဓာကိုယ်လေး သွယ်လျချင်လား။ ဒါဆိုရင်တော့သူတို့လို Diet လုပ်ရပါမယ်။ ကမ္ဘာကျော်တွေက သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းလဲဆိုတော့-
Dua Lipa က အလုပ်များတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ၁၅ မိနစ်စာ Interval Training လုပ်ပါတယ်။ Dua က Boxing ထိုးရတာလည်း ဝါသနာပါပါတယ်။ Dua က ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့အစားအစာတွေကို စားတတ်သူပါ။ သူမဟာ ပျင်းတဲ့ရက်တွေမှာပဲ စားချင်တာတွေစားပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ရက်တွေမှာတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တာတွေပဲစားပါတယ်။ သူမရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်တွေကတော့ သီဟိုစေ့ထောပတ်နဲ့ ငှက်ပျောသီးပါ။
Emma က တစ်နေ့ကို နာရီဝက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါတယ်။ သူမက ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကော စိတ်ကျန်းမာရေးကော အထူးဂရုစိုက်သူပါ။ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာလည်း သဘာဝပစ္စည်းတွေကို သုံးပါတယ်။ Emma က ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို စားပါတယ်။
Kendall က သစ်သီးတွေ အစိမ်းရောင်အရွက်တွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ တစ်နေ့စားတဲ့အရာမှာ ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်အောင် ဂရုစိုက်ပါတယ်။ Detox Teas တွေကိုလည်း သောက်ပါတယ်။ Kendall က မနက်စာမစားပါဘူး။ သူမက ပွဲရှိတဲ့နေ့ဆိုရင် အချိုလုံးဝရှောင်ပါတယ်။ Cardio လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို သဘောကျပြီး အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါတယ်တဲ့။
Zendaya ကလည်း မနက်စာမစားပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မနက်ပိုင်းမှာစားရတဲ့ အစားအသောက်တွေက သူမအကြိုက်တွွေ မဟုတ်လို့ပါတဲ့။ သူမက အသက် ၉ နှစ်အရွယ်ထဲက သတ်သတ်လွတ်စားခဲ့ပါတယ်။ ရေခဲမုန့်ကြိုက်ပြီး နေ့တိုင်းစားနိုင်ပါတယ်တဲ့။ တစ်နေ့ကို ရေနှစ်ခါချိုးတတ်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းကို လန်းဆန်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်းကိုတော့ တစ်နေ့တာပင်ပန်းသမျှ ပြယ်ပျောက်သွားအောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Zendaya က Gym သွားရမှာပျင်းပြီး ကရတာ ကြိုက်ပါတယ်။
Hailey က နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ သကြားများတာတွေကို ရှောင်ပါတယ်။ အစားအစာကန့်သတ်ချက်နဲ့စားတာကို Hailey က သဘောမကျပါဘူး။ အရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ခုမတိုင်ခင်တိုင်း အဆိပ်အတောက်ထုတ်တတ်ပါတယ်။ ရောဂကျင့်တာ၊ Pilate နဲ့ တောင်တက်ရတာကို Hailey ကြိုက်ပါတယ်။
Miley က ၂၀၁၄ တည်းကစပြီးတော့ အရွက်ကို အခြေခံတဲ့ Diet ပဲစားပါတော့တယ်။
MyStyle Myanmar2021-01-16T11:13:24+06:30December 4th, 2019|Fitness, Health, Stars & Style, ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းဆိုင်ရာ – Diets & Weight Loss|
မိသားစုကိုအမြဲရှေ့တမ်းတင်ပြီး အလေးထားတတ်ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်ကိုးဦး